Nepali Rajneeti | नागरिकता नहुनेलाई पनि यसकारण मतदान गर्न दिनुपर्छ भन्छन जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव !
नागरिकता नहुनेलाई पनि यसकारण मतदान गर्न दिनुपर्छ भन्छन जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव !
पुष ५, २०७८ सोमबार १८० पटक हेरिएको
काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले नागरिकता प्रमाणपत्र नहुनेलाई पनि मतदानमा सहभागी गराउनुपर्ने बताएका छन् ।
आइतबार फेसबुकमार्फत उनले नागरिकता प्रमाणपत्र नहुनेको नाम मतदाता नामावलीमा समावेश नगर्नु असंवैधानिक र अन्तर्राष्ट्रिय कानून विपरीत हुने बताएका छन् ।
लाखौं जन्मसिद्ध नागरिकलाई राज्यले अझैसम्म नागरिकता दिन नसकेको र मधेसमा पनि लाखौं नागरिकले नागरिकता प्रमाणपत्र पाउन नसकेको यादवले बताएका छन् ।
‘यस्तो अवस्थामा निर्वाचन आयोगले नागरिकता प्रमाणपत्र नहुनेको नाम मतदाता नामावलीमा समावेश नगर्नु, मतदान गर्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित गर्नु, निर्वाचनको प्रक्रियामा सामेल हुनबाट रोक्ने कार्य असंवैधानिक हुनुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका विपरीत र मानवताविरोधी कार्य हुन्’ उनले भनेका छन्, ‘निरङ्कुश पञ्चायतकाल र राजाको शासनकालमा पनि यस्तो ब्यवस्था थिएन ।’
हाल नेपालमा नागरिकता प्रमाणपत्र लिएका १८ वर्षमाथिका व्यक्तिको नाम मात्र निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावलीमा समावेश गर्ने गरेको छ । मतदाता नामावलीमा नाम भएकाहरुले मात्र निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउँछन् ।
नागरिकता प्रमाणपत्र नभएको अथवा राज्यले दिन नसकेको कारणले मात्र कुनै पनि व्यक्ति गैरनागरिक हुन नसक्ने यादवले बताए । ‘नागरिकताको प्रमाणपत्र दिनुपर्ने दायित्व राज्यको हो, राज्यले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरेको तर त्यसको सजाय जनताले भोग्नुपर्ने यो कस्तो न्याय हो ? तसर्थ सबै नेपाली नागरिकहरूको नाम मतदाता नामावलीमा सामेल गर्नुपर्दछ’ उनले भनेका छन् ।
जसपा अध्यक्ष यादवले निर्वाचन आयोग र सरकारले नागरिकता नभएकालाई पनि मतदाता नामावलीमा समावेश गर्ने विषयमा बेलैमा ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् । यो खबर अनलाइन खबर मा छ ।
१५ वर्षअघिको फाइल खोलिने भएपछि तनावमा उपेन्द्र यादव!!
बाबुरामको बुद्धि सकियो, अस्ती तौलियाले चुच्चे नक्सा छोप्नु भो, आज राष्ट्रिय झन्डा लडाउनु भो !
पार्टी विभाजन भएको ६ महिना नपुग्दै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)मा फेरि अर्को यस्तो अपत्यारीलो खटपट सुरु !
बांकेबाट जसपाका केन्द्रिय सदस्य लगायत २ हजार बढी एमालेमा प्रवेश !
म फेरि एकपटक बौलाएको छु : डा. भट्टराई